नेपाली निबन्धको अब्बल कृति : ‘एक्लो परिचय’ | samakalinsahitya.com
नेपाली साहित्यमा स्थापित नाम हो श्रीओम श्रेष्ठ ‘रोदन’ । कविता, निबन्ध, नियात्रा, लघुकथा र अन्तरवार्ता आदि विधाका करिव एक दर्जन पुस्तक लेखि सकेका रोदनले ‘एक्लो परिचय’ निबन्धसङ्ग्रह हालै प्रकाशनमा ल्याएका छन् । प्रस्तुत पुस्तक भित्र एक्काइस ओटा निबन्धहरू रहेका छन् । बहुमुखि प्रतिभा भएका रोदन कुशल सम्पादकका साथै नाट्यकर्मि र कलाकार पनि हुन् । जीवनका विविध आयामहरूलाई सुन्दरढङ्मा संयोजन गर्न खप्पिस रोदनका सिर्जनाहरूले मानविय जीवनका यीनै आयामहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । समय बलवान हुन्छ, र समयसंग चल्न नसक्ने मान्छेको जीवन निरर्थक हुन्छ भन्ने उनको ठम्याई छ । हेरौं निबन्धभित्रको एकअंशः–‘समयले चोरहरू जोगी बनेका छन् । जोगीहरू चोर भएका छन् । मूर्खहरू अगुवा बनेका छन् । अगुवाहरूले कि मुहार बदलिएका छन् कि पलायन भएका छन् । समय यस्तै कुरामा बलवान् बनेको छ । जस्तै मै हुँ भन्ने र क्रुरहरूलाई पनि पानीपानी बनाउन सक्ने सामथ्र्य छ समयमा ।’
‘एक्लो परिचय’ निबन्धसङ्ग्रह रोदनका वैयक्तिक जीवनका भोगाइ र वर्तमान परिवेशका अनुभूतिलाई समेटेर प्रस्तुत गरिएको एउटा विशिष्ट कृति हो । समाजभित्र छरिएका विकृत र विसङ्गतिलाई शब्दशब्दमा केलाएर समाज सुधारका प्रयत्न पनि भएका छन् ‘एक्लो परिचय’मार्फत । मान्छेका भावना माथि धेरै खेलवाड भैरहेका छन् हालका समयमा । राजनीतिक अन्योलले गर्दा सबै क्षेत्र लथालिङ्ग बनेको छ । बन्द हड्तालका श्रृखलाहरू बढिरहेका छन् । देशका युवाशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम वढ्दो छ । यीनै आक्रोशहरूको स्वर पनि हो ‘एक्लो परिचय’ । र, भावनाको कदर गर्न नसक्नेहरूप्रति विद्रोहको विगुल फुकेर उनीहरूलाई सचेत बनाउने ग्रन्थ पनि हो ‘एक्लो परिचय’ । उनको बुझाइ छ, ‘भावनाको सम्मान जहाँ हुँदा पनि खुसी लाग्छ मलाई । भावना बुझ्ने कुरा संसारकैं सबैभन्दा महँगो छ । मोल हुँदैन भावनाको । आडम्बरी पहाडहरूभन्दा मीठो हाँसो अग्लो हुन्छ । गह्रुङ्गा आदर्शहरू भन्दा मीठो एक बचन महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
प्रस्तुत पुस्तकभित्र चारओटा निबन्धहरू व्यक्ति केन्द्र्रित छन् । साठीको साथी, ईष्र्या लाग्ने नाम, सधैं र सबैका सत्यमोहन, र भूमिगत मृत्यु । शशी भण्डारी, प्रचण्ड मल्ल, सत्यमोहन जोशी र श्रीबिक्रम राणा आदि नेपाली सहित्य, इतिहास, नाटक र चरा विशेषज्ञका रूपमा आफ्नो इतिहास बनाइसकेका हस्तिहरू बारेमा निकै सुन्दर ढंगबाट व्यक्तिचित्र उतारेका छन् रोदनले ‘एक्लो परिचय’मा । लोकतन्त्रको मर्म के हो ? लोकतन्त्र भनेको के हो ? के आन्दोलन, घाएते र शहीद भनेको जहिले पनि नेताको ज्यालादारी मजदुर हुन् ? के लोकतन्त्र भनेको यत्तिकै लागि हो त ? एउटा राजा कमजोर बनाएर दसौंवटा बलिया राजा बनाउनुपर्ने ? लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक बन्नको लागि ओरालो लागिसकेको मृगलाई लखेटिरहनै किन पर्ने ? बहिदार र पियनको योग्यता तयार पारिसक्दा पनि सांसद र मन्त्रीको अलिकति योग्यता निर्धारण गर्न सकिएन । यो लोकतन्त्रकै अवमूल्यन होइन र ? यो सम्झौंताहरूको उपेक्षा होइन र ? जनबलको अपमान होइन र ? शहिद–रगत खेर होइन र ? घाइतेहरूको बेवास्ता होइन र ? मर्ने त मरे–मरे, जिउँदै मारिरहेकाहरूको आँसुको सराप होइन र ? ‘लोकतान्त्रिक प्रश्नहरू’ शिर्षक निबन्धमार्फत यस्ता थुप्रै यावत प्रश्नहरू उठाएका छन् रोदनले । सायद यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने व्यक्ति नै छैनन् हामीसंग । जनताकै नाममा हुने यस्ता विकृतिहरूले कसरी जनतालाई मुक्ति देला खैं ? उनको बुझाई छ यस्तै रबैयाले आफैप्रतिको पनि विस्वास पातलिदैं गएको छ । मान्छेमान्छेकै भिडमा आफैले आफ्नै परिचय गुमनाम हँदैं गएकोमा निकै चिन्तित छन्, रोदन । यी र यस्तै चिन्ताका पोकाहरूले भरिएको छ उनको पछिल्लो कृति ‘एक्लो परिचय’ निबन्धसङ्ग्रह ।
आफ्नो र परिवारको सुनौलो भविश्यको भ्रम बोकेर अमेरिका पुगेका नेपालीहरूको पीडा यस निबन्धसङ्ग्रहको मूल पाटो हो । विदेशमा रहँदाको एक्लोपन र स्वदेशका स्मृतिबिम्बहरूमा आत्मकेन्द्रित रहेर लेखिएका निबन्धहरूको बाहुल्यता वढिनै छ ‘एक्लो परिचय’मा । डायस्पोरिक सपनाको यथार्थचित्रणभित्र आजका मान्छेले आफ्नो आत्मपहिचानबिनानै अर्काको मुलुकमा सिँचिएका पसिनाहरूको साझा व्यथा पनि हुन उनका यी निबन्धहरु । लेखक स्वयम् पनि अमेरिकाको सुखभोग गर्न पुगेका बेलामा त्यहाँको मान्छेका यान्त्रिक जीवनशैलीलाई नजिकबाट नियाल्न पुगे । अझ नेपालीहरूको जीवनशैलीले उनलाई दुःखी पनि बनायो । विरानो मुलुकमा आफ्नो पहिचान गुमाएर बसेका थुुप्रै नेपालीहरूका साझा कथाव्यथाका पोका पनि हुन यी निबन्धहरू । यी मात्र नभएर अमेरिका पुगेका बेलामा हिउँमा खेल्दाका सुखद अनुभूति यहाँ निबन्धका रूपमा पोखिएका छन् । रोदनालाई लाग्छ ‘निद्रा, भोक, परिवार, समाज, संस्कृति गुमाएको हिसाब गर्न जानियो भने त्यहाँको कमाई पक्कै नाफादाएक हुन सक्दैन ।’ त्यसैले त्यहाँको सुखभोग गर्न छोडेर स्वदेशकै पीडामा फर्के रोदन । केही स्वदेश भित्रका कुरा, केही विदेशका कुरा, केही स्वाभिमानी मान्छेका कुराहरूमा केन्द्रित रहेर पाठकलाई मिश्रित स्वाद पस्कन सफल छ ‘एक्लो परिचय’ निबन्धसङ्ग्रह । मानविय संवेदना, राष्ट्रप्रतिको इमान्दारी, संस्कृतिका नाममा भएका विभेद, राजनीतिज्ञले नबुझेका मर्म, गरीबी भित्र पनि इमान्दारिता, विदेशी मोहले पलायन भएका नेपालीका भोगाईका यथार्थता सहित प्रकाशनमा आएका रोदनको निबन्धसङ्ग्रह एक्लो परिचय नेपाली साहित्यको उत्कृष्ठ कृतिको रूपमा लिन सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : शनिवार, 27 माघ, 2069